ဘဏ္ဍာရေးဥပဒ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရှိသည်ဟုမှတ်စရာဝင်ငွေပေါ်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းအခွန်။ ။ ဒါဟာဘာလဲ? ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ
imputed ဝင်ငွေအပေါ်တစ် ဦး ကတစ်ခုတည်းအခွန်။ ... ဒါဘာလဲ? ထပ်မံပြောကြားရန် UTII ကိုစည်ပင်သာယာခရိုင်များ၏ဥပဒေများဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးအထွေထွေအခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်နှင့်အတူလျှောက်ထားပြီးအချို့အမျိုးအစားများအတွက်သာသက်ဆိုင်သည်။
ဘဏ်မှတစ်ဆင့်အပေါင်ပစ္စည်းပစ္စည်း ၀ ယ်ခြင်းကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်၊ သို့သော်“ အပေါင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်ဥပဒေ” တွင်မတူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေကပြsince္ဌာန်းထားသဖြင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
အတွင်းပိုင်းသတင်းအချက်အလက်ကဘာလဲ? အဖြေကရိုးရှင်းပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက် INSIDER INFORMATION (eng ။ Insider information) - လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်အချက်အလက်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်အကြောင်းပြောနေတာ ...
ရုရှား lotto ယူနိုင်ရန်အနိုင်ရရှိတဲ့အမျိုးအစားကဘာလဲရာခိုင်နှုန်း?
ရုရှား Lotto တွင်အနိုင်ရရှိမှုမှမည်မျှစိတ်ဝင်စားသနည်း။ 50% ချက်ချင်းနှင့်အနိုင်ရရှိကနေ 35% ။ ပြည်နယ်ကိုအရူး လုပ်၍ မရပါ၊ သို့သော်ဖြစ်သင့်သည်။ အခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဥပဒေများနှင့်အညီ ...
ကျနော်တို့ပျားရည် paid အခွန်ပိုက်ဆံလျော်ကြေးပေးဘယ်လောက်ငါ့ကိုပြောပြပါ။ န်ဆောင်မှု?
အခွန်ရုံးကပေးဆောင်ရတဲ့ပျားရည်အတွက်ဘယ်လိုလျော်ကြေးပေးသလဲဆိုတာပြောပြပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများ? ဂျုံမှုန့်နှင့်လေဖိအားများဖြင့်သူတို့သည်တစ်ပြားမှပြန်မယူကြပေ။ သူ့အတွက် ...
TCS မှတဆင့်အခွန်အစီရင်ခံစာများကိုဘယ်လိုပို့မလဲ သင်ကတယ်လီကွန်းအော်ပရေတာနှင့်သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုချုပ်ရန်လိုသည်။ အခွန်ထမ်း၊ အထူးဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာနှင့်အခွန်ရုံးတို့ပါဝင်သည်။ တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာတစ်ခုအနေနှင့် ...
သင်တစ် ဦး အနုညာတစီရင်မန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား? ဥပဒေကကွှေးမွီမဆပျသောလုပျဆောငျသူ၏တရားဝင်အခွအေနေကိုဖျောပွထားသညျ၊ လိုအပ်ချက်များကိုတစ်ခုချင်းစီကိုများသောအားဖြင့်အုပ်စုနှစ်စုခွဲထားသည်။
ခန့်မှန်းခြေ schet.Ponyatie? အဘယ်အရာကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပါသလဲ
စာရင်းရှင်။ ဘာနဲ့မတူတာလဲ။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဗဟိုဘဏ်၏ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၈ - ၁“ ၂.၃ ။ စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမဟုတ်သည့်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သော်လည်းကောင်း၊
OJSC ၏ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ဤဆောင်းပါးကကုမ္ပဏီ၏ဒေဝါလီခံခြင်း (ဒေဝါလီခံခြင်း) သည်၎င်း၏အစုရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သောညွှန်ကြားချက်များပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အခြားသူများ၏လုပ်ရပ်များ (အရေးမယူမှု) ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါက ...
သွားဆရာ ၀ န်များသို့သွားသည့်အခွန်ကိုပြန်ပေးရန်ပင်စင်စားတစ် ဦး အနေဖြင့်အခွန်ငွေလျှော့ချရန်အတွက်သမီးသည်မည်သို့စုဆောင်းရန်လိုအပ်သနည်း။ သူမသည်သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်ငွေပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ပင်စင်စားပါ ပင်စင်စားသည်အခွန်ပေးဆောင်ပါသလား ...
အကြွေးကောက်ခံမှုအေဂျင်စီ LLC - ဒီနောက်ထပ်ကွာရှင်းလား? အတွင်းပိုင်း
အကြွေးကောက်ခံမှုအေဂျင်စီ LLC - ဒီနောက်ထပ်ကွာရှင်းလား? gt inside; ဤစုဆောင်းသူများသည်မည်သည့်နေရာမှလာကြသနည်း။ ဒု; ဘဏ်သည်အစုရှယ်ယာအနည်းငယ်ကိုစုဆောင်းထားသည့်ရှာရာသို့အကြွေးမတင်ဘဲရောင်းချခဲ့သည်။ ယခုမှာသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။ ...
သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘာမှမပေးဆပ်ရသေးသူတွေရဲ့အာမခံကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ် ရေနစ်သေဆုံးသူကိုကယ်တင်ခြင်းသည်သူနှင့်အတူရှိသူ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ မင်းအရမ်းကြောက်နေတယ်ဆိုရင် ...
နိုင်ငံသားများ၏ Non-taxable နိမ့်ဆုံးဝင်ငွေ၏တန်ဖိုးရုရှားတွင်ယခုကဘာလဲ?
ရုရှားရှိနိုင်ငံသားများအတွက်လက်ရှိအခွန်လွတ်နိမ့်ဆုံးဝင်ငွေကဘာလဲ။ ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုလက်ခံသလဲ? ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အခွန်စည်းမျဉ်းတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေခွန်အတွက်အခွန်မပေးရသောအနိမ့်ဆုံးအယူအဆမပါ ၀ င်ပါ။ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါဖတ်တယ် ...
စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကဘာတွေလဲ။ စီးပွားရေးအရအရင်းအမြစ်များစီးပွါးရေးအရင်းအမြစ်များသည်ပြင်သစ်မှစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ (ပြင်သစ်မှအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များ) ဆိုလိုသည်မှာစီးပွားရေးသီအိုရီ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေရန်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုသဘာဝ (ကုန်ကြမ်းများ၊ ဘူမိရူပ)၊
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်သည့်အဓိကဥပဒေများ၊ ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေနှင့်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ။
ညအချိန်အတွက်ငွေပေးချေမှုကို ၂၃ နာရီမှည ၆ နာရီညအချိန်တွင်မည်သို့တွက်ချက်မည်နည်းည ၂၂ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ၊ ငွေပေးချေမှုသည် ၁၀% တိုးလာသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ) အထက်ပါသို့ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အမှု၌ ...
ကန့်သတ်များ၏ပညတ်တော်အနုပညာအောက်မှာကျသွား offense ရှိမရှိ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေများ၏ 159, ဒါမှမဟုတ်လိမ်လည်မှုကိုသင်အကြာတွင် 8 နှစ်ပေါင်း DMPA အစပျိုးနိုင်သလဲ
ကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်သည်အနုပညာလက်အောက်တွင်အမှားအယွင်းများရှိသလား။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၉ - လိမ်လည်မှုတစ်ခုလား (၈) နှစ်အကြာမှာသင်စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောလုပ်ရပ်များအတွက်ကန့်သတ်ထားသည့်ကာလမရှိပါ။
အခွန်လား။ အခွန်လား။ ဟုတ်တယ်။ အခွန်ဆိုသည်မှာပြည်နယ်၏ဥပဒေပြုမှုအရပေးအပ်သောငွေပမာဏအရတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုဆောင်ရွက်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှကောက်ခံသောအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များပါဝင်သည်။
အိမ်ငှားနေတဲ့ကားတစ်စီး၊ အဲဒါဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုကားတစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်၊ တစ်နေ့နေ့မှာမင်းပိုက်ဆံပြန်ပေးလိမ့်မယ်။
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,831 စက္ကန့်ကျော် Generate ။